FACIAL ANTI-AGING Fekitori - China FACIAL ANTI-AGING Vagadziri, vatengesi
Anti Kuchembera HIFU Chiso Ganda Rinosimbisa Thermage FL18
Muchina uyu unoshandisa epamusoro-simba masekesi kuitisa yakakwira-simba yakakwira-frequency radio mafungu uye anti kukwegura kusvika pakadzika kweganda.
9D hifu thermagic rf ganda rinosunga kuunyana kubvisa Muviri Slimming F117
Hifu wedzera Theramagic nyowani yakasanganisa iyo creat nekukurumidza kurapwa pane kumeso kusimudza.it isiri-isingaonekwe uye isina mukati inoshanda, inokurumidza uye yakagadzikana, Kumira kwakarurama uye kufunga, Kunoita kuunyana uye ganda rakasununguka kumeso, kwakatenderedza maziso uye nemuviri.
Multifunctional Pore Minimize Winkle Electro-Optical EOS 2
Iyo epidermis inotonhodzwa neye chlled aplicator tip, iyo inowedzera iyo impedance yeganda, inowedzera kudzivirira iyo epidermis uye kumanikidza iyo RF simba kuti ipinde zvakadzika mune pre-inopisa.
Anti kukwegura acne Kuchenesa Ruvara Screen Thermagic RF YeSalon Thermagic V
Iyo yazvino iteration yenyaya, uye sekungofanana neyakatangira, iyo zvakare inoshandisa radio-frequency simba kupisa ganda kubva mukati nekunze.
Anti Kuchembera RF Chiso Radar Ice Sculpture Yekuunyana Kubvisa LB02
Kubudikidza neyakazvimiririra yekuzvitonhodza nzira, inogona kusvika pakadzika kwechinangwa mumasaji ekurapa maitiro. kuitira kuti varwere vasanzwe kurwadziwa.
Cellulite kudzora muviri kuonda uye kuonda uremu RF BL02
Iko kutonhorera kwekubatana kwechimedu chechimedu chemaoko kunogadzirisa tembiricha yeganda uye inochengetedza yakanaka dermal zvivakwa, ichiziva kukurumidza kwemuviri-kugadzirisa maitiro paunenge uchisimbisa ganda!
Mvura dermabrasion kumeso okisijeni jeti ichitarisa H600
Muviri Metabolism: Bio-photon magetsi, RF mashiripiti microcurrent bhodhi Bio-photon: simbisa chiitiko checell uye kukurudzira kukura kwecollagen protein.
Kuchembera Kuchembera Kwakanyanya Kumba RF Ganda Kusunga Chiso Kusimudza Machine Ganda Kuchengeta R8A
Radio frequency haina kufanana nelaser. Radio frequency (RF) inowanzoreva kushomeka mumatunhu emagetsi.
4D Circle Rv Micro Heat Bata RF Runako Midziyo RT08
Inobata Magetsi Kutamisa (CET) inzira inobvumidza iyo magetsi emagetsi eRF kutamisirwa "nekugona" (musimboti wemagetsi capacitor) kumuviri wemurwere kuburikidza neinofambisa yekunze application electrode.
8 in1 Spray oxygen hydro Chiso Kuchenesa CV06
8 mu1 yakadzika yekuchenesa oksijeni pfapfaidzo BIO simudza yekukwesha yemvura dhizairi dermabrasion muchina unoshanda zvakanyanya mukugadzirisa kugadzirwa kweganda, kudzora mitsara yakanaka uye kuunyana, uye kupa yakadzika mvura kune iyo ganda.